Sweet Victory Umboniso — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
ibholithi • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 1:41 pm • impendulo
Senze!!!!!!!!!!!! Uthando lo jam.
Natangwe • EtiMnga 18, 2015 ngexesha 7:58 pm • impendulo
Namibia uyakuthanda jose chameleone '..
Ngamana ubabalo lwakhe malube nani yonke imihla yomntu yobomi bakho.
makayden • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 1:53 pm • impendulo
ndiyayithanda le ngoma. Ur i dude
eTirtsa • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 1:55 pm • impendulo
Ndiyabulela hambo ngokubeka enye albhamu ukuba imbeko uKumkani wethu uSomandla ngaphandle. Uloyiso Bumnandi usondele kwaye dear entliziyweni yam. Ekonsathini e Plano, TX, le ngoma wavakalelwa ngathi ingoma unqulo ngexesha ikonsathi noko ixesha unqulo olukhulu kwaba. Qhubeka sidumise Yena!!
uValerie • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 2:27 pm • impendulo
DerrickMichaelWilliams • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 2:50 pm • impendulo
Enkosi UHAMBO Lee ngokunyaniseka kwakho. Le albhamu wandikhuthaza ngexesha xesha linzima ebomini bam. Le yenye yazo iingoma endizithandayo kwi albhamu. #SweetVictory
“Sinzele uKumkani, abaxinezeleke ukuya eluphahleni, Yayichwayitile thina gon 'ukwenza ngayo ekugqibeleni
Uyandiva, Holla ukuba wondiva, Thina nesaqhubayo nangona nimbaxa
Carlton • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 6:12 pm • impendulo
Ngoko imoto amele “Life christian” okanye eyona nto amele “uYesu”? Okanye ngaba ukumela zombini? Ngolunye uhlobo, ividiyo, zathi waxa iinyembezi.
Carlton • EyeKhala 28, 2015 ngexesha 6:13 pm • impendulo
Keinya • EyoMsintsi 7, 2015 ngexesha 10:28 mna • impendulo
Uthando le vidiyo. Yokomfuziselo kumanqanaba ezininzi! Enkosi into uyenze…oko uThixo akwenzayo ngawe ziviwa kakhulu.
ManuelAdams • EyoMsintsi 16, 2015 ngexesha 11:57 mna • impendulo
Umyalezo wegospile yaye umxholo ngundoqo woloyiso ngokusebenzisa intshutshiso ngezilingo kwakudingeka namhlanje. Umthandazo wam kukuba abantu abaninzi baza kusamkela umqeshi ebalulekileyo eziboniswe kule ngoma nevidiyo. Ngamana uThixo angaqhubeka usinga ukwenza ifuthe ngenxa yezipho zenu.
Nick • EyoMsintsi 18, 2015 ngexesha 7:14 pm • impendulo
uhambo, ubukhe negalelo nam a lot of iindlela. Enkosi ekusasazeni ilizwi likaThixo kubo bonke abantu. Ndiyamthanda umsebenzi wakho kwaye kufuneka athi. inkosi ikusikelele!
Leslie Positive Response • EyeNkanga 6, 2015 ngexesha 9:36 mna • impendulo
Qhubeka ekhonza Uhambo!….umculo wakho inceda ngokusebenzisa amathuba zam emnyama ebomini bam. Soul kokufuna. #phakama
Little Jerry • EyoMqungu 10, 2016 ngexesha 12:06 pm • impendulo
Nantso Uhambo eyoyikekayo,Ngamana ke uNdikhoyo olungileyo ukwandisa imiyalezo yakhe kuwe….UThixo #RandomBars yakho amandla
Joanne • EyoMdumba 12, 2016 ngexesha 4:21 pm • impendulo
Uloyiso Sweet!!! Winter Jam 2016 Knoxville, TN. Ayikwazi ukulinda ukuya kunqula nawe!
BrendaHohensee • EyoMdumba 15, 2016 ngexesha 11:46 mna • impendulo
Ukubukela le vidiyo wadanduluka kuba kwandenza ndacinga le kwemizabalazo ndaya kunyaka ophelileyo nendlela liqhubeka libuya kodwa ngokungakhathali kwaye ekugqibeleni uYesu’ elalindisindisa umusa!!!
Jesudunsin Stephen • UTshazimpuzi 19, 2016 ngexesha 2:10 pm • impendulo
Kianna • UCanzibe 20, 2016 ngexesha 4:12 pm • impendulo
Ingcamango le vidiyo relatable kakhulu. Ndandikuthanda ukubukela ngayo.
Patrick • UCanzibe 23, 2016 ngexesha 11:48 pm • impendulo
Ndiyawuthanda lo ingoma soooo damn kakhulu! akakwazi ukubala Dlala hits.
jon Westra • EyeKhala 1, 2016 ngexesha 2:43 pm • impendulo
Yeyona i ingoma emangalisayo, musa kakubi, kodwa ke ingaba unayo ngenene ukusebenzisa igama elithi “i **” okuchaza?
KIANNA • Isilimela 26, 2016 ngexesha 1:28 pm • impendulo
indoda, Ndathatha elo lixesha lokuzikhumbuza amazwi ukuze le ngoma. Makhe sithi nje ndiyamthanda umyalezo emva ingoma. Ultimate ahlula kukufa uKristu wafela. Ewe, wafa, kodwa wavuka ngawo onke amandla. UHAMBO LEE, Ingase inkosi ikusikelele!!!!!!!!!!!!!
JordanLivada • EyeNkanga 21, 2017 ngexesha 9:58 pm • impendulo
Robin!!! awesome, KaThixo sooooooooooo elungileyo. Makabongwe lowo uzayo egameni leNkosi! :) Wowu, ndazi mna ngoko, ukuba ufuna imithandazo, ubani. :) Yena uya kuphendula!